Chishanu, 19 Chikunguru 2019
Shoko RaMwari Rinogamuchirwa Sei?
"... nokuti iye amene wakati: Handingatongokuregeri, handingatongokusiyi. Naizvozvo tinotsunga moyo, tichiti ..." (VaHeberu 13:5-6).
Shoko raMwari rinofanira kushandiswa. Asi unofanira kunzwisisa kuti rinoshandiswa sei. Izvozvo zvakakosha zvikuru. Shoko raMwari haripo kuti tingoriparidza. Haripo kuti tingoritaura nemusoro. Izvozvo hazvina kunyanya kukosha. Tinofanira kurishandisa pakurarama kwedu. Tinofanira kurigamuchira. Tinofanira kutaura sevanhu vagamuchira Shoko iri. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa mundima yatavhura nayo. Mwari vakataura. Vakatipa Shoko ravo. Vanoda kuti tirigamuchire. Vanoda kuti titaure sevanhu vagamuchira Shoko iri.
Izvi hazvirevi kungotaura zvakataurwa naMwari chete. Ipapo ndipo panokanganisa vakawanda. Ivo vakati, "Handisi kuzokusiya. Handisi kuzokurasa". Asi havatsvaki kuti uti, "Mwari havasi kuzondisiya. Havasi kuzondirasa". Kwete. Vanoda kuti utaure mashoko ako. Asi mashoko aya anofanira kutaridza kuti wagamuchira mashoko avo. Anofanira kutaridza kuti unowirirana nawo.
Izvozvo ndizvo zvinopa Shoko raMwari simba. Ndizvo zvinoita kuti rishande muhupenyu hwako. Taura semunhu agamuchira Shoko raMwari. Taura semunhu anowirirana naro. Izvozvo ndizvo zvakakosha. Ukasadero, Shoko iri harizokubatsiri.
Ngatitarise rimwe Shoko ravakataura. Vakati, "Ndinewe nguva dzose". Saka iwe unogona kuti, "Hongu! Jehovha ndivo mufudzi wangu. Vaneni. Vanotogara mandiri. Saka handina chandichashaiwa. Ndinobudirira kose kwandinoenda. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Ndichagara ndichikunda. Ndichagara ndakafuma. Hupenyu hwangu hucharamba huine kubwinya. Hareruya!"
Usataura uchiti, "Nhai Mwari! Makati muneni. Saka chindipaivo zvandiri kutsvaka izvi. Inga makati muneni wani? Sei ndiri kutambura kudai?" Haufaniri kutaura uchidai. Unenge uri kushandisa mutauro usingatenderwi. Uku kunenge kuri kupa Mwari mhosva. Hakuna zvakunokuwanisa.
Zvinhu zvako zvinogona kunge zvisina kumira zvakanaka. Asi haufaniri kugumbukira Mwari. Gamuchira Shoko ravo. Taura semunhu agamuchira Shoko iri. Taura semunhu anowirirana naro. Ndizvo zvinoitwa paChikristu izvozvo. Ndihwo hupenyu hwerutendo. Rutendo runobuda mumweya wemunhu. Runobuda kana Shoko raMwari richinge rapinda mumweya uyu. Saka unganzwa Shoko raMwari. Rigamuchire. Wochitaura semunhu arigamuchira. Ikoko ndiko kupupurira Shoko raMwari. Ndiko kunogadzirisa zvinhu muhupenyu hwako. Mwari ngavarumbidzwe nokusingaperi!
Ndiri kugara ndichikunda muhupenyu hwangu! Ndinoramba kuvodzwa moyo. Zvinhu zvenyika ino hazvigoni kundikurira. Ndiri mukuru kwazviri. Ndinogara munzvimbo yazvisingasviki. Ishe vakandipinza munzvimbo yakakura. Iyi inzvimbo ine fuma yakawanda. Ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Mukuru wacho ndiye anogara mukati mangu. Saka ndinokunda zuva rimwe nerimwe. Mwari ngavaropafadzwe!